मान्छे Archives - ratoपिरो.com - Blog for Entertainment
अनौँठो परम्परा जहाँ, मृत्युपछि दाहसंस्कार नगरी लाशलाई घरमा सजाएर नै राखिन्छ !!! फोटोफिचर
मृत्यु नै मानिसको अन्तिम विन्दु हो भनिन्छ । तर इन्डोनेशियाको एक समाजले भने यो भनाईलाई मान्दैन । किनकी उक्त समाजमा मृत्युपछि पनि जिन्दगीलाई कायम राख्ने चेष्टा गरिएको अन्तराष्ट्रिय संथाहरुले उल्लेख गरेका छन् । इन्डोनेशियाको...
यी हुन्, विषालु सर्प नाकबाट छिराएर मुखबाट निकाल्ने मान्छे ….!!! फोटो फिचर
सर्प देख्ने वित्तिकै सातो उड्छ धेरैजनाको । सर्पले डस्ने डरले हामी सर्प देख्ने वित्तिकै भाग्छौँ, या सर्पमाथि नै जाईलाग्छौँ । तर चेन्नईका सी मनोहरले सर्पलाई खेलौना जसरी खेलाउँछन् । त्यति मात्रै कहाँ हो र...
[wp_ad_camp_3] मान्छे निद्रामा बर्बराउने तथा हिड्ने गरेको कुरा त थाहा पाएकै कुरा हो । तर यो दुनियामा यस्ता अद्भुत मान्छे समेत हुँदा रहेछन् जसले निदाएको बेलामा चित्र कोर्छन् र पेन्टिङ समेत गर्छन् । निद्रामा...
कस्तो अचम्म ! ब्रा ले नि मान्छे चिन्ने अरे !!!
[wp_ad_camp_2] जापानको एक कम्पनीले हाईटेक ब्रा बनाएको छ, जुन सच्चा प्रेम गर्ने पुरुषको अगाडि मात्र खुल्छ । झट्ट हेर्दा सामान्य जस्तै देखिने यो ब्राले पुरुषको भ्रम तोड्दै उक्त ब्रा लगाउने महिलाले प्रेम गर्छिन कि...
कस्तो अनौठो चिंडियाखाना !! जहाँ मान्छे, पिंजडाभित्र सिंह रहन्छ, बाहिर !!! ( फोटोफिचर – सहित)
जंगलको राजा मानिने सिंहलाई उसको प्राकृतिक बासस्थानमा नजिकबाट देख्नु हरकोही सर्वसाधारणका लागि एक अद्भुत अनुभूति हुन सक्छ । अझ सिंहलाई आफ्नै हातले नजिकबाट खाना खुवाउनु वा आहार दिनु त सामान्य मानिसका लागि सपना जस्तै...
पत्याउनुहुन्छ ? मान्छे यस्ता पनि हुँदारहेछन् (फोटोफिचर सहित)
[wp_ad_camp_2] यो दुनिया आफैमा विचित्र छ । यहाँ विचित्रका मान्छे छन् । कतिपय मान्छे यतिविधि अनौठो चरित्रका छन् की उनीहरुका विशेषता र क्षमता पत्याउनै गाह्रो लाग्ने खालका हुन्छन् । तपाइँ हामीले आँखाले जे चिज...
अचम्म, कहाँ हराए यी मान्छेका टाउका हेर्नुस् त ! (फोटो फिचर)
[wp_ad_camp_1] सामान्यतः हामी खुट्टाले टेकेर हिंड्छौं । हात जहिले पनि माथि हुन्छ खुट्टा तल । अंग्रेजीमा एउटा उखान छ हेड ओभर हिल्स । तर यो उखानलाई एक जना फ्रान्सेली फोटोग्राफरले भने नयाँ अर्थ दिएका...
यी हुन् त्यस्ता मान्छे, जो हावामात्रै खाएर बाँच्छन्…!!
मान्छेलाई बाँच्नको लागि खाना खानुपर्छ । तर विश्वमा यस्ता मान्छे पनि हुँदा रहेछन् जो केवल हावा खाएर मात्र पनि बाँच्न सक्छन् । झ्वाट्ट सुन्दा हाम्रै देशका लिटिल बुद्धको नाममा चर्चा कमाएका एक जना किशोर...
चुरोट पनि मान्छे झै फरर बोल्ने फेरी किन्नु आगडी नै ! कस्तो अचम्म…
[wp_ad_camp_2] वैज्ञानिकहरुले बोल्ने चुरोटको आविष्कार गरेका छन् । चुरोटको बट्टा किन्ने बित्तिकै यो चुरोट बोल्न थाल्नेछ अनि क्रेतालाई चेतावनी दिनेछ । धुमपानको लतबाट मान्छेलाई छुटकारा दिलाउने अभिप्रायका साथ वैज्ञानिकहरुले यस्तो बोल्ने चुरोट बनाएका हुन्...